Rafitra: averina: Inona no tsy maintsy fanovana mijoro? | safidy
Ilaina ny hevitrao
ny Helmut Melzer 16. Septambra 2019, 8: 56 13.8k Views
Manontany anao matetika izahay momba ny lohahevitra iray manokana araka ny hevitrao. Ireo fanambarana ireo dia mandray anjara amin'ny dobo vahaolana ho an'ny ho avy tsara.
Miarahaba sy mieritreritra tsara!
#1 Fanamafisana ny fiarahamonim-pirenena & ny demokrasia mivantana
By passivity ny politika Tao anatin'ny fanontaniana maro lehibe sy ny feo mafy an'ny toekarena, tato anatin'ny folo taona lasa, nisy fiarahamonim-pirenena manerantany matanjaka nipoitra ho hery politika ao aminy, izay tokony omena ny zo. Mandritra izany fotoana izany dia olona maro no mandray fiovana fototra sy tsara ary tsara eran-tany. Nefa ankoatry ny fifidianana dia tsy misy tombontsoa mifanaraka amin'ny fandraisan'ny besinimaro ny fizotry ny fanapahan-kevitra politika. Ny demokrasia dia tokony hatsangana sy hamafisina bebe kokoa. Ho ahy dia ny boka lehibe indrindra. Ny kely indrindra: Ny fitsapan-kevi-bahoaka dia mila avy amin'ny toetran'ny mpandray anjara manokana.
Helmut Melzer, safidy
nampian'i Helmut Melzer 16. Septambra 2019, 8: 58
Werner Kratochwil hoy:
2. Novambra 2019 tamin'ny 16: 47
Manoro hevitra anao aho ny Kongresin'ny Sociokrasia & Politika amin'ny 15./16.11.2019. Ahoana no hamolavolana ny demokrasia mba hahafahantsika mametraka politika miaraka?
#2 Mifehy fa tsy manohitra ny fanapahan-kevitra momba ny politika
Ny fifamoivoizana any Aotrisy no miteraka ny gazy 70% betsaka kokoa noho ny gazy 1990. Mba hahatratrarantsika ny tanjontsika hiarovana ny toetr'andro dia tsy maintsy hianjera haingana sy radikaly io lanja io. Na izany aza, ny minisitry ny fitaterana dia nitsapa ny Tempo 140 eny amin'ny làlambe. Tranga iray mifanohitra amin'ny politika mifanohitra. Ary iray amin'ireo maro, izay tsy hahatratrarana tanjona ary handoro ny volam-bahoaka tsy misy dikany.
Mila fanombohana vaovao isika amin'ny fanapahan-kevitra politika. Mifanohitra fa tsy mifanipaka. Mitsingevana? Efa mandinika ny politikam-pirenena sy isam-paritra ary eo an-toerana i Soeda mba hampiroboroboana ny fandaharam-potoana 2030 sy ny Tanjona Fampandrosoana maharitra (SDGs). Ary noho izany dia misoroka ny fifaneraserana ratsy eo amin'ny vokatry ny tontolo iainana, ara-tsosialy ary ara-toekarena. Ny Agenda 2030 dia nametraka ny kompas amin'ny lalana mety. Mila mandroso fotsiny ny lalana.
Thomas Mördinger, ÖKOBÜRO - Fikambanan'ny hetsika ara-tontolo iainana, SDG Watch Austria
#3 Fahombiazana - miverena amin'ny ampy
Ny fanjifana tanteraka ny akora misy ny olona tsirairay dia tsy maintsy mihena be ary avy amin'ny loharano azo havaozina. Ny rafitra ara-toekarena mifototra amin'ny fitomboana dia tsy voapetraka ho an'io asa io. Ilaintsika ny efitrano misy ny asa fanamboarana ny safidy ara-toekarena izay mitantana tsy misy fitomboana ara-nofo ary mbola afaka manome fahafaham-po sy famatsiana ara-bola na famatsiam-bola amin'ny asan'ny serivisy ho an'ny daholobe toy ny serivisy tombony ary tombontsoa ara-tsosialy (ohatra pension, care). Ny fahombiazan'ny loharanon-karena, toekarena boribory, bioekonomie, famoronana eko, recycling, digitization dia mandray anjara fa tsy ny vahaolana. Ny fanamby ho an'ny tontolon'ny indostria dia antsoina hoe ampy: ny fiverenana amin'ny "ampy"!
nampian'i Helmut Melzer 16. Septambra 2019, 9: 01
#4 Tsy mangatsiaka ny fahasemporana
"Tsy maintsy mianatra isika fa tsy lehibe ny fitiavan-tena ary ny olona tsy maintsy mandoa izany rehefa miezaka ny vidiny mora indrindra. Raha te hampiroborobo ny fandrosoana tsara ao amin'ny fiaraha-monina manerantany ianao dia tsy maintsy mijery mihoatra ny sisin'ny firenena. Ny fidiram-bola mendrika, izay ahafahan'ny olona manatsara sy milamina tsara ny fiainany, dia tokony ho tanjona tanjona maneran-tany ho toy ny fepetra ara-drariny sy azo antoka ho an'ny fianakaviana kely mpamboly sy ny mpiasa fambolena. "
Hartwig Kirner, talen'ny talen'ny Fairtrade Aotrisy
#5 Avereno ny politika momba ny toetr'andro
Raha ny filazan'ny IPCC dia iraika ambin'ny folo taona sisa no tavela hitazonana ny mari-pana ao ambanin'ny 1,5 ° C ary hisorohana ny ratsy indrindra. Aotrisy dia nanolo-tena tamin'ny fampihenana ny entona maoderina avy amin'ny 16 isan-jaton'ny 2020 ary ny 36 isan-jaton'ny 2030. Amin'izao fotoana izao anefa, manadino ireo tanjona efa ambany loatra isika
- mitombo ny fivoahany. Ny politikan'ny toetray dia mila fanombohana vaovao: Raha tokony hampihena ny vola ho an'ny tontolo iainana, ny toe-karena sy ny angovo, ny mainty sy ny manga dia mila manangana izany amin'ny fomba goavana - mba hanamboarana ny trano amin'ny fomba mahomby amin'ny angovo, hanitatra ny fotovoltaika amin'ny faritra lehibe, ampaherezina ny bisikileta ary manome alalana ny fitateram-bahoaka. Ankoatr'izany, ny famaranana ny fisoratana anarana vaovao amin'ny fiara misy motera avy amin'ny 2028 dia tsy azo ihodivirana. Ho soa ho an'ny fahasalamantsika sy ny an'ny planeta!
Adam Pawloff, manampahaizana momba ny toetrandro ary angovo ao Greenpeace Austria
nampian'i Helmut Melzer 16. Septambra 2019, 9: 02
#6 Manamafy orina ny firaisankina sy firaisan-kina
Ny politikam-pandrika ankehitriny dia mikendry ny fahalavorariantsika. Izahay, ny fiarahamonim-pirenena, tsy hanaiky izany! Mila mihetsika mafy sy miray hina isika rehefa raiky ny resaka fankahalana, voarohirohy ny ONG ary ny lalàna mifehy ny lalàna. Ny mpanao politika dia tsy tokony hampifantoka ny tenany amin'ny famoronana tsy an-kiato vaovao ho an'ny fahasimbana ara-tsosialy. Tokony hiresaka isika. Tsy amin'ny rantsantanana fanondro, fa amin'ny tanana maninjitra. Mila manamafy orina sy firaisan-kina isika. Tsy misaraka amin'ny fialonana sy ny tsy fahatokisana isika, tsy tarihin'ny tahotra tsy ara-drariny eo an-tanan'ny mponina. Miady amin'ny fo sy ny atidoha isika - ary tsy misy fifankatiavana ara-tsosialy!
Sarah Kotopulos, SOS Human rights Austria
nampian'i Helmut Melzer 16. Septambra 2019, 9: 00
#7 Common Welfare Economy
Raha tsy mivoatra ny tombom-barotra sy ny tombony, fa ny fiaraha-miasa, ny fahamendrehan'olombelona, ​​ny firaisankina ary ny faharetan'ny tontolo iainana, dia mahazo tombony daholo ny tsirairay. Amin'ity tranga ity, ny momba ireo tantsaha izany dia mihoatra noho ny mpamatsy izy ireo, ary koa ny mpiasa izay manome lanja ny tsirairay ary koa ny mpankafy anay, izay mandray fanapahan-kevitra amin'ny alàlan'ny fividianana vokatra voajanahary miloko. Asehontsika fa hafa be ny asany. Mba hanomezana mangarahara, manomana ny fifandanjan'ny tena mahaliana isika isaky ny roa taona. Io no mahatonga ny faharetana azo refesina. Raha betsaka ny orinasa mandray andraikitra ary hotsaraina araka ireo fepetra ireo dia ho hita miharihary ny fihetsiky ny tsirairay sy ny "greenwashing".
Johannes Gutmann, talen'ny mpitantana sonnentor, Toekarena Fanampiana ho an'ny daholobe
#8 Fahafahana fiainana ho an'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany ihany
Ambonin'ny zava-drehetra, ny restart dia tsy maintsy handresy ny tsy fitandremana misy - ilaina fotsiny ny fiainana ho an'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Raha ny fahitana ny fikambanan ny zon'ny ankizy dia mihoatra ny fahazoana rano fisotro madio, fisakafoanana voalanjalanja, fanabeazana amin'ny qualitative ary fikarakarana ara-pitsaboana, fiarovana amin'ny ady sy herisetra ary fiarovana amin'ny asa fitrandrahana (ankizy) ary fiainana voatokana ho an'ny fahamendrehana.
Gottfried Mernyi, Kindernothilfe Aotrisy
#9 Mamorona tontolo hafa! Mamelona fiainana tsara ho an'ny rehetra
Ny rafitra ara-toekarena ankehitriny dia miankina amin'ny fampitomboana ny tombom-barotra, fivoarana tsy voafetra ary ny loharano tsy voafetra. Noho ny krizy, ny krizy ara-tsosialy ary ny fisondrotan'ny politika maloto, dia mila manontany tena amin'ity rafitra ity isika.
Mba hahatratrarana fiainana tsara ho an'ny olona rehetra, ny fomba, ho an'iza sy ny vokarintsika ary ny fomba fihinantsika dia tsy maintsy tarihin'ny tanjona izay mitondra soa tsara avy amin'ny fomba fijery ara-tsosialy, tontolo iainana ary demokratika. Tsy mikasika ny fanoloana modely ara-toekarena iray hafa izany - manan-kery ho an'izao tontolo izao sy ny tontolon'ny fiarahamonina rehetra. Ao amin'ny Fanambarànay Atoa 2010 dia namariparitra fomba mivaingana sy paikady ahafahana manatratra ny tanjontsika.
David Walch. Attac Austria
nampian'i Helmut Melzer 16. Septambra 2019, 9: 05
#10 Fambolena iray miankina amin'ny kalitao
Ny tokony hiova dia ny rafitra iray manontolo amin'ny indostrian'ny hena, izay aseho amin'ny famokarana faobe ary noho izany dia ambany loatra ny vidin'ny sakafo ho antsika. Izany dia mitaky traboina maharitra telo: voalohany amin'ny biby rehetra, izay voatahiry ao anaty fepetra mahatsiravina noho ny tsindry amin'ny vidiny. Avy eo, ireo mpamboly, izay tsy ampy karama amin'ny asany ary mijaly amin'ny fifaninanana ataon'ireo firenena tsy manana fiompiana biby na fenitra ara-tsosialy na ara-tsosialy. Ary farany nefa tsy latsa-danja amin'izany, ny mpanjifa omena vokatra mora (ary mazava ho azy koa mividy), izay matetika dia manambara fa mamitaka na manala baraka.
Mba ho velona amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena amin'ny fotoana maharitra, dia mila fambolena mifantoka amin'ny kalitao i Aotrisy. Mazava ho azy fa tsy maintsy omen'ny mpanjifa ihany koa ity kalitao ity. Ny APATRA FOTSOA dia niasa nandritra ny taona maro mba hampitomboana ny fahalalahan'ny mpanjifa momba ny sakafo manara-penitra sy ny fampitandremana miverimberina amin'ny vokatra mora avy any ivelany - tsy hadinony mihitsy ny manadino fa na any Austria aza dia betsaka ny fanatsarana ny sehatry ny biby dia azo atao ary ilaina.
Heli Dungler, mpanorina ary filoha FOUR PAWS
nampian'i Helmut Melzer 16. Septambra 2019, 8: 59
#11 Fomba iray azo jerena ary mifototra amin'ny zava-misy amin'ny olona sy ny natiora
Ny rafitra hoe "reboot" dia misy zavatra manelingelina ahy, satria izany dia manisy toe-javatra saika tsy azo atao. Raha miatrika ireo harena voajanahary, ny "reboot" dia misy fitaom-panahy. Na izany aza, fantatsika fa ho tonga haingana io faran'ny politika sy ara-toekarena io. Na dia maro aza ny milaza ny mifanohitra amin'izany, ny angon-drakitra marina dia milaza amintsika fa vitsy dia vitsy ny olona niaina fahantrana tanteraka toa izao. Ny fari-piainanay manokana dia tonga amin'ny haavo tsy manam-paharoa. Raha ny hevitro dia tsy mila famerenana rafitra intsony. Ny fikarakarana ny olombelona sy ny voajanahary azo antoka dia ho ampy hahasoa antsika amin'ny ho avy manerantany.
Andrea Barschdorf-Hager, Tale Jeneraly Care Austria
#12 Diniho indray ny rafitra angovo miaraka amin'ny fanavaozana
Amin'ny sehatry ny angovo dia mbola mifikitra amin'ny vanim-potoanan'ny fôsily isika. Mbola resahina ny momba ny fomba azo ampidirina ireo fanavaozana ao anatin'ilay rafitra efa misy ary rehefa "vonona ny tsena" izy ireo. Ity no fomba diso tanteraka. Ny rafitra angovo miaraka amin'ny fanavaozana dia tsy maintsy averina ary hatsangana indray. Ny arina, ny entona, ny solika ary ny angovo nokleary dia hameno tsy ho ela ny hantsana ary hivoaka tsy ho ela ny rafitra. Raha tsy mety tsara ireo, dia tsy mifanaraka amin'ny rafitra ary tsy afaka entina intsony. Ary hatramin 'ny "fahamatorana tsena": ny fanavaozana dia efa any amin'ilay trano vaovao, ny orinasa mpamokatra angovo mora indrindra. Ary raha toa izahay ka sahy hamarana ny fanjokonana amin'ny fivarotana tsena ho an'ny famonoana ny toetrandro ny sehatry ny angovo azo haingam-pandeha, ny fanavaozana dia haingana be mora indrindra amin'ny fanavaozana. Izany dia manafaingana ny fihenan'ny angovo, hampihena ny angovo ary, ho toy ny bonus dia mijoro amin'ny krizy amin'ny toetr'andro.
Stefan Moidl, talen'ny IG Windkraft
nampian'i Helmut Melzer 16. Septambra 2019, 9: 03
#13 Manova ny fifamoivoizana ny mpamono toetr'andro
Ny krizy momba ny toetrandro no tena manahirana ny fotoanantsika amin'izao. Miteraka sy aradraraka ny filana ara-toekarena sy sosialy ankehitriny: ny kapitalisma. Noho izany, ity rafitra ity dia tsy maintsy resena!
Ny fomba fiainana ananan'ny tsy refesina dia tsy mifanaraka amin'ny fanovana rafitra. Miorina amin'ny fitrandrahana tsy misy fetrany ny harena voajanahary sy ny asa ary midika ho fianana ara-materialy ho an'ny olona vitsy izany, fa tsy mamela fiainana tsara ho an'ny rehetra.
Ny fomba famokarana sy fandaniam-bola dia tsy maintsy miova amin'ny fomba fidirana an-tsehatra, indrindra amin'ny sehatry ny fitaterana, ny toetran'ny toetrandro lehibe indrindra any Aotrisy: Noho izany ny fananganana fotodrafitrasa goavana toa ny Lobauautobahn sy ny 3 dia tsy maintsy ovaina. Piste eo amin'ny seranam-piaramanidina mba hisakanana!
"Fanovana rafitra fa tsy fiovan'ny toetr'andro"
nampian'i Helmut Melzer 16. Septambra 2019, 9: 04
#14 Tsy misy herisetra amin'ny ankizy
Inona no olana atrehin'ireo ankizy manerantany? Fianarana tsara? Ampy hanina? Ny fiovaovan'ny toetrandro? Fiadanana, ao an-trano sy an'izao tontolo izao? Nahagaga ahy ny valiny: Ny herisetra mianjady amin'ny ankizy, na ara-tsaina na ara-batana, dia mahita ny ankizy rehetra na aiza na aiza ho an'ny olana lehibe indrindra. Irin'izy ireo izahay olon-dehibe hahita izany ary hanao zavatra momba izany. Izany no napetrakantsika ao amin'ny World Vision - manerantany, amin'ireo vondron'olona mahantra indrindra iarahantsika miasa. Amin'izay ihany isika vao afaka manova fiovana eto amin'ity tontolo ity.
Sebastian Corti, CEO World Vision Austria
#15 Tokony hiova ny fihetsintsika!
Ny tiana holazaina dia ny fitahirizan'ireo olona eo amin'ny fahefana, ho antsika olombelona toy ny «passive» masses, ary isika rehetra koa, ilay sombin-tany izay iainantsika, tsy misy dikany raha ny fiainana, fa koa ny fihetsiktsika amin'ny fitondran-tena ratsy amin'ny idealy antsika. Soatoavina toy ny loharanon-karena mamelona aina ao amin'ny planeta!
Raha misy drafi-drafitra nahalasa dia tokony hanaraka ireo hevi-diso ireo izy:1. Planet Earth aloha - tsara ho an'i Pacha Mama a!2. Fiatrehana ny tsirairay - famolavolana kolontsaina mihaino! Amin'ny fifandraisana mifandraika amin'ny votoaty, ny fanombanana ary ny fanombanana ny fandinihanasamy hafa! Raiso ny andraikitrao sy mihazona fifandraisana feno fanajana! Ny rafitra dia nataon'olombelona ary manan-kery hanovana isika!3. Namorona loharano ara-bola fototra ho an'ny olona rehetra sy handray anjara amin'nyAvelao ny famolavolana miaraka amin'ny tontolo iainany! Mpanao politika voafidy, mpitondra fanjakana, raha vao mandray an'ity andraikitra mitantana ity izy ireo dia tokony hikarakara ny vahoaka tsy nifidy azy ireo. Raha jerena ny firenena manontolo - mba ahafahan'ny REHETRA miaina tsara. Ny fanjakana iray dia toy ny haran-dranomasina mila ny toe-javatra "madio sy mahavelona" hitazonana ny fahasamihafana izay miara-miaina symbiosis! Raha manelingelina ny fifandanjana dia misy faritra maty ary misy fiatraikany amin'ny rafitra rehetra izany!
Mahazo miditra amin'ny zanatsika amin'ny alalàn'ny fihainoana azy ireo am-pahatsorana sy fampiroboroboana azy ireo ny saina ary mamela azy ireo ny habaka isan-karazany ho an'ny fampandrosoana, miaraka amin'ny fahatokisan-tena sy ny fandraisana an-tena, hitombo ho olom-pirenena manana andraikitra eto an-tany, olom-pirenena tompon'andraikitra eto an-tany!Mazava ho azy fa io dia manangana politikam-pampianarana izay manaiky sy mamatsy vola amin'ity loharanon-karena ity, ka mahatonga azy hanana isa ara-ideolojika ary koa manangona vola bebe kokoa noho ny teo aloha.Andrea Willson, Pedagogue, Mother and Chair Action 21-pro mpandray anjara olom-pirenena mpandray anjara
#16 Ny fiarovana ny zavamananaina
Ny fiarovana ny toetrandro sy ny fitandroana ny maha-zava-boajanahary dia ny fanamby lehibe indrindra amin'ny politika momba ny tontolo iainana. Satria momba ny ho avy sy ny fiainan'ny taranaka manaraka. Ny firafitra ho an'izany dia tsy maintsy mamorona ny politika - tsy maintsy miasa tsy ankijanona ary ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny hery an-tsitrapo rehetra ho an'ny fiainana ho avy. Ny fanodikodinana ny natiora miaraka amin'ny tombony fohy fohy dia tsy maintsy omena fandavana mazava.
Dagmar Breschar, Union Conservation Union Conservation Union
nampian'i Helmut Melzer 16. Septambra 2019, 9: 06
#17 Mampihena ny dian-tongotra, amboary ny dian-tànana
Miaina mihoatra ny sisin'ny planeta isika, ary toy izany koa amin'ny pump. Ny mpampindram-bola dia taranaka tanora sy ho avy ary olona avy amin'ny tany atsimo. Hiaina ny vokadratsin'ny vokatra be ny krizy izay miharatsy. Raha mampihena ny dian-tongotra ekolojika ianao, dia manao dingana voalohany ianao. Fa tsy ho ampy ho an'ny fidinana izany. Ny dingana faharoa dia ny tànan'ny fanolorantenanao manokana. Ny faharetana dia tsy ho resy fotsiny raha manova rafitra isika. Azontsika atao amin'ny lafiny kely amin'ny alàlan'ny fifanarahana any amin'ny klioba, sekoly, oniversite na any am-piasana - ohatra, hividianana vokatra maharitra - na miaraka amin'ny famporisihana hivadika ho bisikileta, bus ary lamasinina. Ary amin'ny lafiny rehetra, fanerena bebe kokoa amin'ny politika iray izay mifantoka amin'ny faharetana.
Bebe kokoa momba ny Germanwatch Hand Print: www.handprint.de
Stefan Küper, mpitondra tenin'ny fikambanana Germanwatch momba ny tontolo iainana sy fampandrosoana ary mpanentana manokana momba ny toetr'andro sy fampandrosoana
nampian'i Helmut Melzer 16. Septambra 2019, 9: 07
#18 Tsy misy ankizy ao Aotrisy navela hitombo fahantrana intsony
324.000 Ny ankizy sy ny tanora dia tandindomin-doza ny fahantrana. Manana lanjan-jaza ambany izy ireo amin'ny fiterahana, matetika dia misy lozam-pifamoivoizana, matetika mitaraina amin'ny kibo sy aretin'andoha. Ny fampianarana, ny fanohanana sy ny fanohanana ny dyslexia dia tsy afaka manome ny antsasaky ny tokantrano rehetra tandindomin-doza. Ary noho izany, ny zaza sahirana ankehitriny dia ho lasa olon-dehibe mahantra ny ampitso. Tsy maintsy miova. Miaraka amin'ny tombotsoan'ny zaza, ny vola isam-bolana izay, mihena ny fidiram-bolan'ny ray aman-dreny, dia mahazo antoka daholo ny ankizy rehetra. Noho izany ny fandraisana anjara sy ny fampandrosoana dia azo antoka ho an'ny ankizy rehetra.
Erich Fenninger, talen'ny Volkshilfe
#19 ny zon'ny ankizy
Ny fahantrana amin'ny fahazazana dia misy voka-dratsy manimba amin'ny fivelarana ara-batana sy fahatsapana sy ara-tsosialy amin'ny ankizy. Manimba ny fisian'ny zaza ny fahantranaManimba ny ho avin'ny zaza ny fahantrana. Raha tsy afaka mandeha any an-tsekoly ny ankizy, dia kely sisa ny fanantenana azony.
47% amin'ny 900 an-tapitrisany mahantra no ankizy. Ny fahantrana amin'ny zaza dia misy fiantraikany mandritra ny androm-piainany, satria ny fototry ny fiainana mampanantena dia napetraka amin'ny fahazazana - amin'ny fanabeazany, ny fahaizany ara-tsosialy, ny fahasalamana.Mandroba izany fotoana izany ny fahantrana.
Ny zon'ny ankizy dia milaza amintsika izay ilain'ny ankizy: ohatra, ny zon'ny sakafo, ny fanabeazana, ny tafo amin'ny lohany, ny fialam-boly ary ny filalaovana.Ny ankizy tsirairay dia manana zo hiaro amin'ny fitrandrahana ary zony hahafantatra hoe iza ny ray aman-dreniny. Soa ihany fa vitsivitsy taminay no tsy maintsy noana, fa samy ankizy avokoa izahay rehetra. Azontsika atao ihany koa ny mijery an'izay ilain'ny ankizy.
Araka ny fanadihadiana natao vao haingana dia olona 60 an-tapitrisany eran'izao tontolo izao no afaka miala amin'ny fahantrana raha mandeha an-tsekoly mandritra ny taona 2 ela kokoa izy ireo.
Ny zon'ny ankizy dia manana ny fahamarinany iraisan'ny rehetra. Ireo zon'ny rehetra ireo dia manana adidy iraisana hanomezam-boninahitra ny zon'ny ankizy ihany koa.
Caritas Austria dia nametraka ny tenany tanjony ny hanomezana zaza 50.000 (manerantany) tombony amin'ny fitomboana sy fidirana amin'ny fampianarana.
Raha toa ka vokatry ny hatsiaka sy ny krizy ny ankizy dia loza izany. Raha tsy avela na afaka hianatra ny ankizy dia misy fiantraikany amin'ny ho avy ny voka-dratsy ateraky ny fiainany sy ny fiarahamonina izay itomboany. Ho an'ny ankizy ny ankehitriny ary ny ho avin'ny fiaraha-monina, ary ny fiaraha-monina tsy hadino dia fiaraha-monina manadino ny ho avy.Christoph Schweifer, sekretera jeneralin'ny Caritas ho an'ny raharaha iraisam-pirenenaraharaha
#20 Sidina manidina
Raha manana oncolo mahery mahery 20 mahery taona ianao dia afaka mahita zavatra ratsy marobe ao anatin'ity rafitra ity. Mitaraina ny hôpitaly momba ny toeram-pitsaboana outcological feno olona.Marenomenona ny marary marary homamiadana momba ny fitsangantsanganana mafy any amin'ny hopitaly ary fotoana miandry ela na hijanona amin'ny fiara mpamonjy voina. Ny tena ilaintsika dia ny famerenana tanteraka. Ny fanafody dia tokony ho lasa mifantoka kokoa amin'ny faharetana ary "mitombo" hatrany amin'ny marary. Miorina eo amin'ny - indrisy fa kely loatra ny ekipa palliative finday - tokony hanomboka tamim-pahasahiana amam-pitiavana ianao izay hiverenan'ny dokotera mody any amin'ny marary homamiadana (ary manao santion-drà, izay ilaina amin'ny fitantanana ny simiaina manaraka) ary ao anatin'ny fepetra sasany ihany koa amin'ny fitsaboana. Afaka mitantana trano. Noho izany, ny olona iray dia afaka manome (tsy takatra) ny dokotera tanora misavoritaka izay mitaky asa mahafa-po sy mahafa-po ary mamonjy ny marary homamiadana be dia be tsy ilaina sy fotoana honenana ary afaka manome fotoana be dia be ny fiainana, afaka mandany tsara kokoa izy ireo.
Doris Kiefhaber, Fanampiana ho an'ny homamiadana Austrian
nampian'i Helmut Melzer 16. Septambra 2019, 9: 08
#21 Fahasalamana hatrany am-bohoka
Fantatsika anio fa tsy kisendrasendra ny fahasalamana. Ny faniriana lehibe kokoa noho ny noheverina teo aloha dia ampitaina hatramin'ny taranaka nifandimby ary namolavola tao an-kibo! Raha ohatra, ny vehivavy bevohoka dia tratry ny hanoanana, tsy fahasalamana, fihenjanana amin'ny tontolo iainana, fihenjanana mafy na herisetra, na raha mihinana toaka sy nikotina tenany izy, dia misy fiantraikany amin'ny fiainam-piainan'ny zaza ao aoriana ... ary koa ho an'ny zafikeliny.
Ireo zavatra ireo dia tsy tokony hampisy andraikitra bebe kokoa amin'ny reny miandry antenaina. Tsia, heveriko fa iraka mazava izy ireo: andao hanao izay rehetra azontsika atao atao mba hahazoana antoka fa tsara ny vehivavy sy ny zaza bevohoka. Namorona taranaka iray izay afaka hanararaotra ny famahana ny olana lehibe manerantany isika!
Martina Kronthaler, hetsika Sekretera jeneraly
#22 Inona no tokony hanova ny fototra?
Andriamatoa sy Ramatoa Australiana dia te hipetraka eo anoloan'ilay fandaharana amin'ny fahitalavitra, miteny ratsy an'izao tontolo izao sy izay tsy tokony ataon'ny hafa amin'iny. TONTOLO IZAO REHETRA amin'ny famokarana ny fanantenana ny politika. Samba eny an-dalambe - aiza ny fiarahamonina? Fahantrana amin'ny fanabeazana - aiza ny minisitra tavela? Tsy miresaka amiko ny mpifanila trano amiko - aiza no misy fampiofanana fanjakana? Mihevitra matetika izahay fa tsy mahomby amin'ny fanjakana ny fanjakana.
Ahoana raha mamaha ny olantsika isika? Ahoana raha ataontsika ny fampidirana, ny fanabeazana ary ny tontolo iainana tsara kokoa - mirotsaka! "Aza manontany izay azon'ny firenenao ho anao - anontanio izay azonao atao ho an'ny firenenao," hoy i John F. Kennedy. Initiative no ilaina! Tsy afaka misolo an'izany ny fanjakana. Tsy afaka hisolo ny fanjakana ny fifanarahana. Ny iray koa mitaky. Io dia mitondra amin'ny politika tsara kokoa! Raha mba hahalala amin'ny farany izany ary hampiroborobo ny fanolorantenan'ny olom-pirenena! Fa izao aho dia miantso "fanjakana bebe kokoa".
Günther Lutschinger, Association Fundraising Australiana
nampian'i Helmut Melzer 16. Septambra 2019, 9: 09
Previous article Vivienne Westwood dia manohana ny Oxfams #SecondHandSeptember
Lahatsoratra manaraka Andro manadio tontolo izao 2019
Vivienne Westwood dia manohana ny Oxfams #SecondHandSeptember